အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဆိုလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ တီယာနေး – Myan Ball
အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဆိုလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ တီယာနေး
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ တီယာနေးက ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းသာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စကော့တလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ အသင်းရဲ့ ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်ပိုင်းလိုက်ပါပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့လို့ ပင်နယ်တီ လက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပင်နယ်တီကို လာကာဇက်တီက သွင်းယူပေးပြီး အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တီယာနေးက “ ဒါက အစပဲ ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား? ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနေ့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာ တစ်ခုခု ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ကျွန်တော်တို့ ရလဒ်တွေ အနည်းငယ်ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတေ့ာ ကျွန်တော်တို့ ရလဒ်တွေ ပြန်ကောင်းလာပါပြီ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်းအောင် စတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ (၁-ဝ) နဲ့ ရှုံးနိမ့်ရမှာကို မလိုချင်ခဲ့လို့ အခွင့်အရေးတွေ ဆက်တိုက် ဖန်တီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (၁-ဝ) နဲ့ ရှုံးနေတဲ့အခါ နောက်က လိုက်ကစားဖို့ အရမ်းခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့က ဦးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းက အခုမွ အစပဲ ရွိေသးတယ္လို႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆိုလိုက္တဲ့ အာဆင္နယ္ေနာက္ခံလူ တီယာေနး
အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံလူ တီယာေနးက ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္းသာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စေကာ့တလန္လက္ေရြးစင္ကစားသမားဟာ အသင္းရဲ႕ ဘယ္ျခမ္းတိုက္စစ္ပိုင္းလိုက္ပါၿပီး အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့လို႔ ပင္နယ္တီ လက္ေဆာင္ရခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပင္နယ္တီကို လာကာဇက္တီက သြင္းယူေပးၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
တီယာေနးက “ ဒါက အစပဲ ရွိေသးတယ္မဟုတ္လား? ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီေန႔ ပရိသတ္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စရာ တစ္ခုခု ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီရာသီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလဒ္ေတြ အနည္းငယ္ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတ့ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလဒ္ေတြ ျပန္ေကာင္းလာပါၿပီ။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုေကာင္းေအာင္ စတင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၁-၀) နဲ႔ ရႈံးနိမ့္ရမွာကို မလိုခ်င္ခဲ့လို႔ အခြင့္အေရးေတြ ဆက္တိုက္ ဖန္တီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ (၁-၀) နဲ႔ ရႈံးေနတဲ့အခါ ေနာက္က လိုက္ကစားဖို႔ အရမ္းခက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဦးေဆာင္သြားခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
နိုင်ပွဲတွေ ဆက်ရနေရန် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကစားသမား ဖာရန်တောရက်စ်